Eurovision 2018-2019, zvese zvaunoda kuti uzive: mazuva, nzvimbo uye nezvimwe! | Ndipei zororo
Gabriela moran | | Nhau dzemumhanzi, Vaimbi, General, mumhanzi
Semagariro, Europe inopemberera yadzo yechinyakare rwiyo mutambo unonzi Eurovision imomo nhengo dzese dzeEuropean Broadcasting Union (EBU) dzinotora chikamu. Ndiwo mutambo wemimhanzi wepagore nevateereri vakura kwazvo pasirese: Yasvika kune vateereri mamirioni mazana matanhatu evatariri pasi rese! Yakatepfenyurwa isina kumiswa kubva 600, saka ndiwo mukwikwi wekare weTV uye uchiri kushanda, ndosaka mutambo uyu wakapihwa Guinness Record muna 1956. Gore rino, Eurovision 2018 yakaitika kuAltice Arena muguta reLisbon, Portugal musi waMay 8, 10 na12.
Mutambo uyu waizivikanwa kuti wainyanya kusimudzira mhando pop. Munguva pfupi yapfuura mhando dzakasiyana dzakabatanidzwa senge tango, arabic, kutamba, rap, rock, punk uye zvemagetsi mimhanzi. Verenga pamusoro kuti uwane zvese zvakaitika paEurovision 2018!
1 Dingindira uye ongororo yakawandisa Eurovision 2018
1.1 Semifainari 1
1.2 Semifainari 2
2 Chokwadi chinonakidza nezve eurovision ...
3 Gadzirira Eurovision 2019!
Dingindira uye ongororo yakawandisa Eurovision 2018
Chirevo chikuru chaive chekuti "All Aboard!" rakashandurwa muchiSpanish se "Vese vari muchikepe." Iyo Thematic inotaura kukosha kwezviitiko zvegungwa uye zvegungwa zvinomiririra chakakosha hupfumi hwenyika inogarwa. Chiratidzo chinomiririra hozhwa, iyo inopfuudza hunhu hwesiyano, kuremekedzana uye kushivirira.
Chiitiko ichi chakaitwa na Silvia Alberto, Catalina Furtado, Filomena Cautela naDaniela Ruah. Eurovision 2018 yaive ne kutora chikamu kukuru kwenyika makumi mana nematatu. Akakunda yaive nyika yeIsrael nenziyo "Toy" yakaimbwa nemuimbi weIsrael uye DJ Netta Barzilai. Rwiyo rwakavhenekwa seimwe yemubairo unodiwa kwemwedzi pamberi pemutambo. Mutambo wega wega unosanganisira zvikamu zvekubvisa: 2 semi-fainari uye yekupedzisira huru mumazuva akasiyana echiitiko.
Mutambo usati watanga, zvakajairwa kuita semi-fainari dhizaini. Kana iri Portugal, Spain, Germany, United Kingdom, France neItaly vaingozviperekedza kuenda kumagumol. Dzimwe nyika dzakakwikwidza kuhwina nzvimbo yavo mumasemifinal maviri musi waMay 8 na 9 uko Nyika gumi dzine mavhoti epamusoro mumasemifinal ega ega dzakapinda mufainari huru pa10.
Yaive nenyika 19 uye iyo 8 yaMay. Rondedzero yenyika dzakakwikwidza husiku ihwohwo semifinal 1 yeEurovision 2018 ndeinotevera:
Nyika gumi chete ndidzo dzakawana nzira yavo kuenda kumagumo nehurongwa hunotevera hwekufarira mavhoti: Israel, Cyprus, Czech Republic, Austria, Estonia, Ireland, Bulgaria, Albania, Lithuania neFinland.
Nziyo shanu dzavaifarira uye mavhoti avo dzaive dzinotevera:
Toy. Muiti: Netta (Israel) - mazana maviri nemakumi matatu nematatu
Moto. Mutambi: Eleni Foureira (Cyprus) - 262 mapoinzi
Ndinyepere. Mutambi: Mikolas Josef (Czech Republic) - 232 mapoinzi
Hapana mumwe asi Iwe. Mutambi: Cesár Sampson (Austria) - 231 mapoinzi
La Forza. Muiti: Alekseev (Belarus) - 201 mapoinzi
Iyo 10 yaMay uye nyika gumi nesere dzakatora chikamu, vakwikwidzi vakanyorwa pazasi:
Nzvimbo yekusarudzwa kwenyika gumi dzakapfuura kuenda kufainari ndeinotevera: Norway, Sweden, Moldova, Australia, Denmark, Ukraine, Netherlands, Slovenia, Serbia neHungary.
Kuvhota kwepamusoro mashanu mumutambo wechipiri wechipiri kunoratidzwa pazasi:
Ndiwo Manyorere Iwe Rwiyo. Muiti: Alexander Rybak (Norway) - 266 mapoinzi
Kutamba Iwe Kure. Mutambi: Benjamin Ingrosso (Sweden) - 254 mapoinzi
Zuva Rangu Rakanaka. Muiti: DoReDos (Moldova) - 235 mapoinzi
Tine Rudo. Mutambi: Jessica Mauboy (Australia) - 212 mapoinzi
Nzvimbo Yakakwirira. Muiti: Rasmussen (Denmark) - makumi maviri nemana poindi
Chikamu chezvishamiso zvikuru zvehusiku zvinoonekwa sekuregererwa kwePoland, Latvia neMalta vane nziyo dzaive pakati pevanodiwa mumwedzi yapfuura kuenda kumagumo emakwikwi. Kune rimwe divi, Eurovision 2018 yaive iyo edition iyo Russia neRomania vasina kukodzera sevapedzisi kekutanga munhoroondo.
Zuva guru rekupedzisira rakaitika 12 yaMay. Vatori vechikamu vakaumbwa nenyika gumi dzakarongerwa kubva kumafainari ekutanga neechipiri, kuwedzera kune nyika nhanhatu dzaive dzichipfuura otomatiki. Saka huwandu hwe 26 vekupedzisira vakapinda mumakwikwi eEurovision 2018 uye vakaratidza kuratidzwa kukuru kune vaoni.
Tafura yezvinzvimbo zveiyo 2018 Eurovision yekupedzisira uchifunga nezve 26 vekupedzisira ndeiyi inotevera:
Moto. Mutambi: Eleni Foureira (Cyprus) - 436 mapoinzi
Hapana mumwe asi Iwe. Mutambi: Cesár Sampson (Austria) - 342 mapoinzi
Iwe Ndirege Ndifambe Ndoga. Mutambi: Michael Schulte (Germany) - mazana matatu nemakumi matatu
Asiri mi avete fatto niente. Mutambi: Ermal Meta & Fabrizio Moro - makumi matatu nemasere
Ndinyepere. Mutambi: Mikolas Josef (Czech Republic) - 281 mapoinzi
Kutamba Iwe Kure. Mutambi: Benjamin Ingrosso (Sweden) - 274 mapoinzi
La Forza. Muiti: Alekseev (Belarus) - 245 mapoinzi
Nova Deca. Muiti: Sanja Ilić & Balkanika (Serbia) - zana nemakumi matatu nematatu
Mall. Muiti: Eugent Bushpepa (Albania) - 184 mapoinzi
Patinenge Tachembera. Muiti: Ieva Zasimauskaitė (Lithuania) - 181 mapoinzi
Ngoni. Muiti: Madame Monsieur (France) - 173 mapoinzi
Mapfupa. Muiti: EQUINOX (Bulgaria) - 166 mapoinzi
Ndiwo Manyorere Iwe Rwiyo. Muiti: Alexander Rybak (Norway) - 144 mapoinzi
Pamwe chete. Mutambi: Ryan O'Shaughnessy (Ireland) - 136 mapoinzi
Pasi peManera. Mutambi: Mélovin (Ukraine) - zana nemakumi matatu
Outlaw In 'Em. Mutambi: Waylon (Netherlands) - gumi nemaviri poindi
Tine Rudo. Mutambi: Jessica Mauboy (Australia) - 99 mapoinzi
Viszlát nyár. Mutambi: AWS (Hungary) - makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
Hvala, ne! Muiti: Lea Sirk (Slovenia) - makumi matanhatu nematanhatu
Rwiyo rwako. Muturikiri: Alfred García na Amaia Romero (Spain) - makumi matanhatu nematanhatu
Dutu. Mutambi: SuRie (United Kingdom) - makumi mana nematanhatu
Zvikara. Mutambi: Saara Aalto (Finland) - makumi mana nematanhatu
Kana Jardim. Mutambi: Cláudia Pascoal (Portugal) - makumi matatu nemapfumbamwe
Pakati pekutarisira kukuru, gakava uye runyorwa rwevanodiwa, zvakaziviswa rwiyo rukuru rwekukunda rwehusiku: Toy! Inoitwa naDJ / muimbi uye Netta aine mamaki ekutsvaira. Kuita kwake kwakanangana netsika dzechiJapan, izvo zvakakonzera gakava paakaedza kukoshesa tsika dzechiJapan sezvo zvipfeko, magadzirirwo ebvudzi nemagadzirirwo zvaive zvakafemerwa netsika dzeJapan.
Chokwadi chinonakidza nezve eurovision ...
Pamusoro pekupomerwa pamusoro pekuita kwaNetta Barzilai, kwaive nezvimwe zviitiko zvakapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo panguva yekupedzisira. Ndozvazvakaita nyaya ye Kuita kwaSuRie, uko fan yakatora danho ndokutora maikorofoni kuti ataure dzimwe pfungwa dzake dzezvematongerwo enyika, munhu uyu akazoonekwa semunhu anoita zvematongerwo enyika. Dare rakazopa SuRie kudzokorodza mashandiro, zvisinei kupihwa kwakarambidzwa uye chiratidziro chakaenderera nehurongwa hwakatarwa kare.
Ukuwo, China yakaongorora zvimwe zvikamu zvevakwikwidzi nekuti vakaratidza zviratidzo kana matambiro aireva ungochani panguva yekutanga semifinal yeEurovision 2018. Chikonzero nei iyo EBU yakamisa chibvumirano chayo nechiteshi munyika iyoyo nekukakavadzana kuti hazviiti mudiwa anoenderana nemitengo inosanganisirwa inoitirwa kusimudzirwa uye kupembererwa kuburikidza nemumhanzi. Mhedzisiro yacho yaive iyo kumiswa kwekuendeswa kwemasemifinal yechipiri uye huru yekupedzisira munyika iyoyo.
Gadzirira Eurovision 2019!
Tine Israeri semutungamiriri wedu anotevera! Israel yakashanda senyika inogarwa kanoverengeka: muna 1979 na1999.
Iyo EBU yakazivisa munaGunyana 13, 2018 kuti iro guta rinotambira chiitiko ichi richava Tel Aviv yeEurovision 2019. Zvichaitika mumazuva acho Chivabvu 14, 16 na18 kuInternational Convention Center (Expo Tel Aviv).
Makwikwi anozoitika mu Pavilion 2 yeInternational Convention Center ine chinzvimbo chevanhu vangangoita zviuru gumi. Tichifunga nezve chokwadi ichi, Eurovision 2019 yaizove nekwanisi padiki pane iyo yapfuura edition muLisbon. Zvisinei, rimwe remapepanhau akakosha muIsrael rakazivisa izvozvo zviuru zvina chete zvematikiti ndizvo zvichatengeswa. Izvi, nekuti iyo nzvimbo yevanhu zviuru zviviri ichavharwa nemakamera nedariro, nepo vamwe vese vachizochengeterwa European Broadcasting Union.
Kazhinji kutengeswa kwematikiti kunotanga pakati pemwedzi waZvita naNdira. Izvo zvakakosha kuti utarise kuti mugove nemitengo zvinosiyana gore rega rega, saka iwe unofanirwa kuziva kune chero nhau. Mid-tier mitengo ine avhareji mutengo we60 euros kune ese semifinal uye 150 euros yemakwikwi ekupedzisira.
Usaora moyo kana ukasawana tikiti rako mukutenderera kwekutanga kana kwechipiri. Sezvo murudzi urwu rwechiitiko, matikiti anogona kuchengeterwa mazuva ari padyo nechiitiko nekuda kwekushambadzira zvikonzero zvekuburitsa chiitiko ne "chakatengeswa" kana "chakatengeswa." Nekudaro, kuwedzera mikana yekuenda kumakwikwi, ndizvo inokurudzirwa kujoina yepamutemo Eurovision fan makirabhu nekuti ivo vane chikamu chikuru chematikiti akachengeterwa nhengo dzavo. Iyo nzvimbo inowanzo kuve padyo padariro!
Gal Gadot, mutambi ane mukurumbira wemuIsrael akakokwa kunotora Erurovisión 2019, kutora kwake chikamu hakuna kusimbiswa.
Paive nemaguta matatu aigona kuita mutambo wevagari vemo: Tel Aviv, Eilat neJerusalem, yekupedzisira yakanga yatora nzvimbo senzvimbo mbiri dzakapfuura dzakaitirwa mutambo uyu munyika imwecheteyo. Varongi vechiitiko ichi vanosimbisa kuti Tel Aviv inoenderana neguta nechisarudzo chakanakisa chechiitiko ichi, kunyangwe zvese zvikumbiro zvaive zvemuenzaniso. Parizvino mutambo une kutora chikamu kwenyika makumi matatu.
Kune rumwe rutivi, kune kumwe kuratidzira kunopokana neIsrael senzvimbo yemakwikwi. Israeri yakatarisana a mamiriro ezvematongerwo enyika, saka kuti chikonzero chikuru chekusawirirana inyaya yezvematongerwo enyika uye zviito zvayakatora kune dzimwe nyika. Nyika dzakadai se United Kingdom, Sweden neIceland vanofunga kuti kubata Eurovision munyika iyoyo kutyora kodzero dzevanhu uye vanofunga kuti varege kuzviisa muchiitiko ichi.
Kuwedzera, iyo EBU yakaburitsa zvirevo zvepamutemo ichizivisa kuti kuchengetedzeka kwechiitiko kwakakosha kwazvo kune zvirongwa zvekuenderera mberi nekosi yavo. Mutungamiriri wehurumende anotarisirwa kuvimbisa kuchengetedzeka muzvinhu zvese, pamwe nerusununguko rwekufamba kuitira kuti vese vateveri vanoshuvira vapinde muchiitiko ichi zvisinei nenyika yavo. Ivo vanofunga iko kuremekedza kwetsika dze kusanganisa uye kusiyana kwakakosha kuzviitiko zveEurovision uye zvinofanirwa kuremekedzwa nenyika dzese dzinotambira.
Pasina kupokana, mumhanzi unobatanidza vanhu, tsika uye unowirirana manzwiro kuitira kuti mapoka makuru aungane kuburikidza nenziyo nenziyo. Ini ndinokukoka iwe kushanyira iyo yepamutemo peji ye Eurovision kune rumwe ruzivo rweiyo 2018 edition uye kufambira mberi kwegore rinotevera.
Usakanganwe kuona kweiyo inotevera edition kuchave nezvakawanda zvekutaura nezvazvo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » General » Eurovision 2018-2019